Rickshaw, ny fitaterana sinoa nentim-paharazana | Fitsangatsanganana tanteraka
Daniel | | Shina
Any amin'ny firenena any Azia atsimo sy atsinanana, avy any India ka hatrany Sina, fomba fitaterana nentim-paharazana fantatra amin'ny hoe posy.
Amin'ny ankapobeny io fomba fitaterana hafahafa io dia karazana kodiarana roa kodiarana tantanan'ny olona iray. Fivoarana ny famolavolana tany am-boalohany, izay nisy sarety hazo tsotra notarihin'ny olona an-tongotra.
Androany izay mandeha amin'ny toerana fizahan-tany mahazatra indrindra an'ny goavambe Aziatika dia afaka mahita ny ankamaroan'ireo fiara ireo. Amin'ny Beijing ohatra hoe aiza ny posy no fantatra fotsiny hoe taxi-bisikileta. Fiara an-jatony amin'ireo no mandeha eny an-dalambe ao afovoan-tanànan'i Sina isan'andro, tarihan'ny mpamily miasa mafy sy manam-pahaizana izay miditra amin-tahotra amin'ny fikorontanan'ny tanàna.
Tsy ny fomba tena ahazoana aina sy haingana indrindra hitety tanàna, fa ny mpizahatany no tia azy ireo.
El vidiny Ny mitaingina posy adiny iray dia manodidina ny 30 yuan (eo amin'ny 4 euro eo ho eo amin'ny tahan'ny fifanakalozana ankehitriny). Any amin'ny tanàna hafa ao amin'ny firenena, toy ny Hangzhou o Shenzhen, mora kokoa aza ny taha.
1 Tantaran'ny posy any Sina
2 Mitsangatsangana any Beijing amin'ny posy
Tantaran'ny posy any Sina
Nanjary nalaza ho fitaovana fitaterana ampiasain'ny Sinoa mpanankarena tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX ny "posy sinoa". Ny asan'ny mpamily (na dia mety kokoa aza ny fiantsoana azy io ho "mpitifitra") ireo fiara ireo dia mety ho sarotra amintsika, saingy vao mainka aza izany tamin'ny lasa, raha ny manan-karena sy ny matanjaka dia nafindra tao anaty lambam-pandriana.
Ny modely voalohany dia nanomboka niparitaka tany Chine tamin'ny taona 1886. Folo taona taty aoriana vao nampiasaina izy ireo fitaovam-pitateram-bahoaka nanjary nanjary ankapobeny. Ny posiposy dia singa iray lehibe amin'ny fivoaran'ny tanàn-dehibe an'i Shina tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Tsy ho fitaovam-pitaterana fotsiny fa ho fivelomana ho an'ny olona an'arivony koa.
Tombanan'ireo mpahay tantara fa manodidina ny taona 1900 tany Beijing fotsiny dia 9.000 amin'ireo fiara ireo no mivezivezy, ary mampiasa olona 60.000 mahery. Io isa io dia tsy nijanona nitombo, nahatratra 10.000 tamin'ny tapaky ny taonjato.
Na izany aza, niova ny zava-drehetra taorian'ny ady sy ny fiakaran'ny herin'ny Mao Zedong. Ho an'ny kaominista, ny posiposy dia tandindon'ny famoretan'ny kapitalista ny mpiasa, ka nesorin'izy ireo tsy hiparitaka ary nandrara ny fampiasana azy tamin'ny 1949.
Mitsangatsangana any Beijing amin'ny posy
Ireo posiposy mandehandeha eny amin'ny araben'i Shina ankehitriny dia tsy nitaingina olona an-tongotra intsony, fa an'ny mpamily bisikilety. Mbola asa mafy io, na dia tsy mafy toy ny teo aloha aza.
En Beijing Ilaina ny manavaka ny posiposy manolotra serivisy mitovy amin'ny an'ny taxi sy ireo natolotra ny mpizahatany ho fomba mahafinaritra hitsidihana ireo tsangambato lehibe ao an-tanàna. Toy izany ireto posiposy fizahan-tany miditra ny hutongs, ny làlambe misy ny ampahany tranainy indrindra amin'ny renivohitra sinoa.
Mafy ny zavatra niainana, na dia zava-dehibe ho an'ny mpandeha aza ny mahafantatra zavatra vitsivitsy alohan'ny hidirany amin'ny iray amin'ireo fiara ireo.
Hanombohana azy dia tsy maintsy fantatrao manambola ny vidiny. Mpamily maro no hanandrana hampandoa vola hatramin'ny 500 yuan (mihoatra ny 60 euro) mandritra ny adiny iray, izay tena lafo tokoa. Raha mijoro tsara isika ary mahafantatra ny fomba hiady, ny vidiny nifanarahana dia azo ampidinina hatramin'ny 80 yuan, na kely aza.
Ny zavatra iray tokony ho fantatra dia ny fijanonan'ny mpamily indrindra amin'ny fivarotana namana na havana. Ny hevitra dia mandany vola any ny mpandeha alohan'ny hanohizany ny zotra be mamaky ny tanàna.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Rickshaw, ilay fitaterana nentim-paharazana sinoa
Toerana fitsangatsanganana any Honeymoon any Etazonia